Talkpod N58 3G / WiFi (Android yakavhurwa) - Network maRadio
musha / Radios / Network maRadio / Talkpod N58 3G / WiFi (Android yakavhurwa)
Iyo N58 PTT Network Kubata Screen Android Radio ine 2.4 inch yekubata skrini uye isina kuvhurwa Android system iyo inounza iwe kukurumidza kushandiswa kwemaapplication mazhinji ePush-to-Talk tekinoroji. Inobatanidza ruzha uye yakajeka odhiyo, yakasarudzika mukurumari uye kwakanyanya kuchengetedzeka. Iyo inotsanangudza patsva ruzivo rwekutaurirana, iine yakakwana kufukidza pane 2G / 3G yekutengesa netiweki.
tarisa Kutaura hurukuro N58 PTT4U Shanduro yehunyanzvi
Inosanganisirwa mubhokisi: Talkpod N58, antenna, bhatiri, bhandi clip uye charger yedesktop.
Iyo N58 PTT Network Kubata Screen Android Radio ine 2.4 inch touch screen uye yakavhurika Android system iyo inounza iwe kushandiswa kukuru kwekushandisa kwakawanda nePush-to-Talk tekinoroji, Iyo inosanganisa ruzha uye yakajeka odhiyo, kusimba kwakasimba uye kwakanyanya kuchengetedzeka. Iyo inotsanangudza patsva ruzivo rwekutaurirana, iine yakakwana kufukidza pane 2G / 3G yekutengesa netiweki.
Iyo N58 inoratidzirwa ne 2.4 inch yekubata skrini iyo yakagadzirirwa nekumira-kuramba, anti-kukanganisa uye kugona kwayo kuratidza chinzvimbo cheGPS mumepu kunounza iwe yakanakisa ruzivo rwekushandisa.
Iyo N58 ine Android system yakangofanana nenjere foni, inogona kubatanidza kune wifi, shandisa akasiyana maficha ekuwedzera ruzivo rwekushandisa.
Frequency Range GSM: 900 / 1800MHz; GSM: 850 / 1900MHz;
SIM card slot 1 x Yakajairwa SIM
Mutauriri 36mm mutauri ane ruzha
Zviyero (H × W × D) 115x54x36 (mamirimita)
uchishandisa System Android 4.4.2
ndangariro 4GB kuchengetedza / 512MB RAM
Applications Google Play, Push-to-kutaura APP
MAKARALI USB 4.0 / chinokukunda (Low Energy)
kanyanga Yakakwira inonamira kanyanga
Mitauro Inotsigirwa Chirungu, Chinese, nezvimwe…
Ports Kenwood Standard Rudzi
Knob Chiteshi uye Vhoriyamu / On / Off
Makiyi akazvitsaurira PTT, SOS, Zvirongwa zvinogadzirirwa
uchishandisa Temperature -10 ℃ kusvika 55 ℃
Storage Storage -40 ℃ kusvika 85 ℃
uchishandisa Humidity 5% - 95% RH
Water Nemishonga IP54
Battery capacity 1650 / 3200mAh Li-Ion Bhatiri
Battery Life Kumira: 72 h; Taura: 10 h
garandi 2 Years
5 anodzokorora nokuti Talkpod N58 3G / WiFi (Android yakavhurwa)
CT1EIZ - January 1, 2018
Pandakangotora radio iyi ndakanzwa kuida! Iyo yakasimba kwazvo, ine odhiyo inoshamisa, zvine ruzha senge chero Motorola redhiyo-giredhi redhiyo, crispy uye yakajeka kurira. Yakavakirwa pakukwana nezvinhu zvemhando yepamusoro kwazvo. Talkpod ziva zvavari kuita! Ndakanga ndine mawairesi mazhinji aYaesu, Icom naKenwood. Ndinoshuva dai vaive hafu yakanaka maererano nezwi seTalkpod N58. Iyi mhando yehunyanzvi-giredhi redhiyo, saka unogona kutora yako mhedziso.
Rikard Sohlberg (Zvinosimbiswa muridzi) - January 29, 2018
Wakave neN58 mazuva mashoma. Anofara kwazvo kusvika ikozvino. Saizi yakakwana uye huremu, zvarara zvakakwana mumaoko!
Zviri nyore kuti uende, kana ndangorangarira kukwirisa yangu pre-yakabhadharwa SIM kadhi!
Yakanaka yakajeka odhiyo uye nyore kurodha pasi Zello. Parizvino, ini ndangoshandisa Zello uye Broadcastify. Ndafara kuve neChicago PD kumashure…
Kuderera chete ndiko kunoshaikwa zvinyorwa. Ruoko rwekare seni runofarira kuverenga zvinyorwa ... Asi zvimwe kunze kweizvozvo, ndinogona kuzvikurudzira!
73 de SM0JWX / Rikard muSweden
Ian - January 30, 2018
Yechipiri PTT redhiyo ini ndatenga kubva kunetiweki maredhiyo, iwo akachengeteka uye akachengeteka sevhisi yekushandisa, iyo talkpod N58 irisime rakasimba rakavakwa redhiyo, yakajeka izwi, mhando yemhando kit. yakavakwa yakasimba uye iri nyore kushandisa.
Ini ndinoshandisa zvakanyanya paIRN asiwo zello uye echolink, ine mhando uye nyanzvi inonzwa kwazviri uye ndinoikurudzira zvizere.
yeredhiyo yausingambozvidembi kutenga, IP54 Water Resistance uye yakanaka yekushandisa kunze kwemukova,
Yakakwira-Kugona Li-Ion Bhatiri 3000mAh inokwanisa kushandiswa kwenguva yakareba uye akasiyana maratidziro yeyuniti.
Yakajeka uye inoteerera skrini uye kukwenya kusagadzikana, nyore kuverenga
Ini ndinokurudzira zvikuru
Chris G7DDN - February 14, 2018
Ida ichi chigadzirwa! Yakavakwa setangi uye ine ese anodikanwa emukati mechiitiko chikuru kushandisa Zello, IRN uye EchoLink. Ini ndinoishandisawo kuteerera Broadcast radio!
Yakanaka rutsigiro kubva kuDuarte uye nhau dzekuenderera mberi firmware kukwidziridzwa kuri kuuya kunoita ramangwana kupenya kweiyi diki HT senge SDR Smartphone.
Kushandisa iyo Internet senge imwe nzira Ionosphere izano rakanaka uye ndinogona kuramba ndichikurukura neshamwari dzangu dzeHamu kubva chero kwese kwandinoshuvira.
Ndakanga ndisina chokwadi neizvi, asi ikozvino ndazvishandisa, zvave kupindwa muropa! Kana IRN (uye Zello) ikaramba ichisimukira sezvazviri, izvi zvinogona kunge zviri BIG!
73 uye cu pamhepo.
orrinsinc (Zvinosimbiswa muridzi) - August 13, 2018
Ini ndinoda iyi redhiyo unit uye maficha ayo aanofanira kupa. Asi iyo yuniti haiuye nebhuku remanyorero pane setup maitiro. Iyo chiteshi inosarudza bhatani ingave yakanaka kwazvo, dai ndaigona kuishandisa neyangu WalkieFleet app uye mukomana oh mukomana, ini ndinenge ndichigadzirira zvese! Iyo Zello app inoita basa rakakura uye inondichengetedza kubva mukuodzwa mwoyo pamwe ne TeamSpeak uye Echolink. Nekudaro, ini ndichiri kupa iri redhiyo uye shamwari dzangu Network Radio 5 nyeredzi yeakatanhamara hutungamiriri chigadzirwa masevhisi.
305€ Wedzera ngoro